Goobaha ay ka dhacayaan Cayaaraha London Olympic 2012 - BBC Somali
Goobaha ay ka dhacayaan Cayaaraha London Olympic 2012
27 Luulyo 2011
Goobo kala duwan oo isugu jira London iyo meelo ka baxsanba way ka dhacayaan cayaaraha kala duwan ee lagu tartamayo cayaaraha Olympic-ada adduunka ee 2012-ka London lagu qabanayo. Gobolo ayaa ka mid ah meelaha ay kubadda cagtu ka dhacayso.
Garoonka Olympic-ga ee sida gaarka ah u muuqda, wuxuu ku yaallaa dhinaca koonfureed ee laga soo galo beerta Olympic ee xaafadda Stratford ee Bariga London. Garoonka hadda kuraastiisu waa ku meelgaar. Marka cayaaruhu dhamaadaan waa laga fiiqi doonaa, waxaana u soo guuraysa garoonka kooxda West Ham. Sawirka: Getty/London 2012
Xarunta Lee Valley Water ee ku taalla Hertfordshire, ayaa ah tii ugu horaysay ee la dhamaystiro bishii December, 2010. Cayaaraha Canoe-ga ayaa lagu qaban doonaa.